Magaalaa Finfinneetti dargaggoonni hojii kophee qulqulleessuutti bobba’an hojii irraa dhorkamuu isaanii ibsan - ዜና ከምንጩ
Magaalaa Finfinneetti dargaggoonni hojii kophee qulqulleessuutti bobba’an hojii irraa dhorkamuu isaanii ibsan
Magaalaa Finfinneetti; keessumaayyuu walakkeessa magaalaatti dargaggoonni hojii kophee qulqulleessuu (liistirootti) bobba’an hojii irraa dhorkamuu isaanii Addis Maaledaatti ibsaniiru.
Dargaggoonni kun hojii irraa kan dhorkaman kabachiistota danbii magaalaa Finfinneetiin yoo ta’u; sababni dhorkamaniifis miseensota Diyaaspooraa ayyaana Qellee biyyatti kabajuuf gara Itoophiyaa dhufaniin akka walqabatu itti himameera. Addis Maaledaanis keessumattuu walakkeessa magaalaa Finfinnee keessa naanna’uun dargaggoonni hojii kophee qulqulleessuutti bobba’an bakka hojii isaanii akka hinjirre ilaalteetti.
Dargaggoonni Addis Maaledaan aasofsiiste “diyaaspooraan miliyoona tokko ta’an gara biyyaatti waan dhufanuuf hojii keessan irraa ka’aa jedhamnee qabeenyaa keenya saamamneerra” jedhan.
Hojii maatii ittiin bulchinu akka hinhojjenne dhorkamuun keenya sirrii ta’uu hafuun isaa osoo hinxiqqaatin danboonni qabeenyaa keenya saamaniiru kan jedhan komattoonni; Muddee 16 bara 2014 irraa jalqabuun hojii irraa dhorkamuu isaanii fi qabeenyaan isaaniis akka saamame ibsaniiru.
Namni Masfiin Arsaadoo jedhamn waggoottan saddeet darbanitti maatii isaanii kan bulchan kophee qulqulleessuudhaan (liistiroo) hojjechuudhaan akka ta’e himanii; gidduu kana garuu diyaaspooraan dhufuu sababeeffachuun kabachiistonni danbii hojii irraa akka isaan kaasanii fi meeshaalee hojiidhaan hojjetanus akka jalaa fudhatan dubbataniiru.
Kabachiistonni danbii “diyaaspooraan waan dhufanuuf isin as taa’uun bifa biyyaatiif gaarii miti” jechuun nu kaasan kan jedhan Masfiin; ilaalchaaf gaarii miti kan jedhamne waan hiyyeessa taaneefi; hiyyummaan keenya immoo diyaaspooraa jalaas kan dhokate miti jechuun yaada isaanii kennan.
Itti dabaluunis, “danboonni waggaatti yeroo lamaa fi sadii meeshaa keenya nu jalaa fuudhu; ani yeroo lama meeshaan liistiroo kiyya guutuun najalaa fudhatameera; meeshaa kana kanan bite kophee qulqulleessen malee hatee miti; wayita najalaa fudhatamu garuu akka yakkamaatti lakkaa’ameeni” jechuun komee isaanii dhageessisaniiru.
Diyaaspooraan dhufuu hordofee sharaa fi qalama kophee birrii kuma tokkoo fi 200tti shaallagamu saamameera kan jedhan Masfiin; bara 2010 fi 2013tti meeshaa birrii kuma 14ti shallagamu danboonni akka isaan saaman yaadataniiru.
Namni kun meeshaa jalaa fudhatame deebisiisuuf qaama mootummaati komee isaanii akka dhiyeeffatan ibsanii; garuu “danboonni qabeenya kiyya ofii isaaniitiif fudhatan” jechuun dallananii dubbataniiru.
Diyaaspooraan gara biyyaa dhufuun isaanii biyyattiin rakkina ishee mudate keessaa akka baatuuf shoora olaanaa yoo qabaates; dargaggoonni kun hojii irraa dhorkamuun isaanii garuu maatiin isaanii utuu hinhafin rakkootti saaxiluu isaa ibsaniiru.
Haala walfakkaatuun maanguddoon Ribqaa Walde Kidaan jedhaman ijoollee isaanii kan jiraachisan galii kophee qulqulleesshuudhaan argatanuun yoo ta’u; Muddee 16 bara 2014 eegalee hojicha akka hinhojjenne kabachiistota danbiitiin dhorkamuu isaanii himaniiru.
“Daa’imman lama kanain barsiisuu fi kiraa manaa birrii kuma lamaa fi 500 kan kaffalu hojii liistirootti bobba’ee galiin argadhuun; hojii biraa akkan hinhojjenne yeroo lama qaama baqaqfadhee waanin daheef hindanda’u” kan jedhan Ribqaan; hojii irraa waan dhorkamaniif daa’imman isaanii rakkootti kan saaxilaman ta’uu dubbatan.
Kanaan walqabsiisuunis; daa’imni kiyya mana barumsaatii dhufuun harme nyaata naaf kenni naan jedha; maalin kennaaf? Maal gochuun qaba? Kan jedhan Ribqaan; rakkoo isaan mudateef mootummaan furmaata akka kennuuf gaafataniiru.
Meeshaalee liistiroo isaanii (kursii, biruushii fi saanqaa) kabachiistonni danbii akka jalaa fudhatan ibsanii; kan biro jalaas fudhatameera jedhan. Eessatti haagallu? Maal haa hojjennu? Meeshaalee liistiroo keenya akkamitti nu jalaa fe’atu? Kan jedhan Ribqaan; mootummaan atattamaan furmaata nuuf kennuu qaba jechuun dubbataniiru.
Dargaggoonni kun hojii dhaabsifamuu fi qabeenyaan isaanii saamamuun dabalatatti; kan meeshaa keenya hinfuudhinaa jechuun gaafatan hidhamuun isaanii himameera.
“Asitti hojjechuu hindandeessan jechuun meeshaalee keenya saamaniiru; maaliif nu jalaa fudhatama jechuun kan falman hiryoonni koo sadii meeshaan isaanii saamamee isaanis mana hidhaatti geeffamaniiru” kan jedhan immoo Zuuriyaash Abiraari. Zuuriyaash daa’imman abbaan isaanii lubbuun hinjirre bunaa fi shaayii gurguruun jiraachisaa waggoota jaha turuu isaanii ibsanii; amma hojii dhaabaa jedhamuun isaanii akka komii itti uume dubbataniiru.
Namoonni komii dhiyeeffachuu isaaniitiin Addis Maaledaan aasofsiiste kun “fuula duratti diyaaspooraan ni dhufa jedhamee hiyyeeyyiin akkamitti hojii isaanii irraa ari’amu?” jechuun gaaffii dhiyeessu. Gara qaama dhimmichi ilaaluutti deemuun komii keenya dhiyeeffannee turre kan jedhan namoonni yaada kennan kunneen; hanga guyyoota 15tti hojii jalqabuu akka hindandeenyee fi meeshaan keenya saamames akka hindeebine nutty himameera jedhaniiru.
አዲስ ማለዳ 23 Muddee 2014 No 28
Total views : 7512144